Maxay U Isticmaalayaasha U Kala Baxeen Email-kaaga | Martech Zone
Maxay U Isticmaalayaasha U Kala Baxeen Email-kaaga
Wednesday, May 16, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Qaar badan oo ka mid ah suuqleyda emailka ayaa ku dhaca halbeeg ay ku diraan e-mayl iyagoo ku saleynaya jadwalkooda shirkadeed ama yoolalka ay leeyihiin halkii ay uga baahnaan lahaayeen macaamiisha. Bixinta e-mayllada dhagaystayaashaada iyo hubinta inay qiimo leeyihiin ayaa ka dhigaysa inay ka mid noqdaan kuwa diiwaangashan, ku hawlan, beddelaya… ugu dambayntiina waxay kaa ilaalin doonaan faylkooda qashinka ah.
Ka dib booqashada websaydhkaaga, samaynta wax iibsiga, ama ku turunturoodeen boggaaga shirkadda, macaamil ayaa iska diiwaangeliyey inuu email kaaga helo. Suuqgeeye, kani waa kan ugu nugul, xiriirka adag ee la ilaalinayo, iyo hal talaabo qaldan ayaa ku dhamaan kara musiibo iyada oo lala socdo waraaqahaaga elektarooniga ah ee ku jira faylka spam.
Tani Macluumaadka Litmus waxay si dhow u eegaysaa dabeecadaha shaandhaynta ka qaybqaadashada ee Gmail iyo Hotmail, sababaha ay ku kaliftay in macaamiisha ay uga xumaadaan emaylka, iyo tabaha kordhinta hawlgelinta.
Tags: emailfilter emailEmail Marketinghawlgelintafilter qashinkaspamfilter spamUnsubscribe
Waa muhiim inaad kala soocdo liiska emaylkaaga haddii ay suurogal tahay. Qof kasta oo isdiiwaangaliya maahan inuu leeyahay baahiyo isku mid ah. Haddii fariinta aysan khusayn markasta waxaad waayi doontaa iyaga.